धुर्मुस सुन्तली बने लखनभाई र लक्षुमनिया (भिडियोसहित)
झापा । हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) मैथिली फिल्ममा देखिएका छन् । बाल विवाह र चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धको फिल्म मुन्नीमा उनीहरु लखनभाई र लक्षुमनियाको भूमिकामा देखिएका हुन् ।
समाजसेवासँगै सन्देशमुलक फिल्म निर्माणमा लागेका धुर्मुस सुन्तलीको बालमैत्री
१७ औं जन्मदिन मनाउँदै राजेशपायल
काठमाडौं l दर्शन नमस्ते गायक राजेशपायल राईको आज जन्मदिन । कति औ जन्मदिन ? सत्रौं । प्रश्न भूइँमा खस्न नपाउँदै उनले जवाफ फर्काइहाल्छन । सत्रौं जन्मदिन मनाएको चाहिं कति बर्ष भयो नि ? मलाई खास १७ देखि उता गन्नु आउँदैन । त्यस्तै १२÷१३ बर्ष भयो कि सत्रौ जन्मदिन मनाएको ।
आफ्नो ब्राण्डेड हाँसो उनले थाम्न
राष्ट्रिय कलाकारको साथमा कनकाई बासीलाई मनोरञ्जन
पूर्व विद्यार्थी समाजले भृकुटीमा अक्षयकोष स्थापना गर्ने
सुरुङ्गा । मंगलबार कनकाई नगरबासीहरुले सांगितीक मनोरञ्जन लिएका छन् । उनीहरुले कनकाई नगरपालिका–७ स्थित भृकुटी मा.वि. दुर्गापुरका आयोजित एक साँगितिक कार्यक्रममा राष्ट्रियस्तरका कलाकारहरुबाट मनोरञ्जन लिएका हुन् ।
हालै विद्यालयमा गठित भूतपूर्व
मिस टिन नेपालको ताज जस्मिनलाई
‘१४ औं मिस टिन नेपाल-२०१६’ को उपाधी काठमाण्डौकी जस्मिन खड्काले जितेकी छिन् । काठमाण्डौ जेसिसद्धारा मंगलबार कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित अन्तिम प्रतिस्पर्धामा उनले मिस टिन नेपाल-२०१६को उपाधि जितेकी हुन् । शिर्ष उपाधिसँगै उनले मिस फोटोजिनक विधामा ताज र विभिन्न उपहार समेत प्राप्त गरिन् ।
दर्शक तान्दै छक्का पन्जा
तोपगाछी । भनिन्छ, मान्छेलाई हँसाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली जनतालाई हँसाउन झनै चुनौतिपूर्ण छ । अभाव र तनावमा बाँचिरहेका हजारौं नेपालीलाई सिनेमा हलसम्म तानेर हँसाउन सफल भएको नेपाली चलचित्र छक्का पन्जा ।
चलचित्रले सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म सबै उमेर र वर्गका
मिस पूर्वाञ्चल विश्वकर्माको फिनाले १४ गते
दमक । पूर्वाञ्चलमा जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्ने उद्देश्यले विश्वकर्मा युवा संस्था दमकले शूरु गरेको मिस विश्वकर्मा पूर्वाञ्चलको ग्रेण्ड फिनाले नजिकिएसँगै आयोजकले विभिन्न कार्यक्रमलाई प्रथमिकता दिन शूरु गरेको छ ।
यही असोज १४ गते हुने ग्रेण्ड फिनालीलाई लक्षित गरी आइतबार च्यारिटि शो कार्यक्रमको
यस्ताे छ करिनाबारे २० रोचक तथ्य
‘कभी खुसी कभी गम’, ‘जब वि मेट’, ‘थ्री इडियट’लगायतका चर्चित फिल्ममा अभिनेत्री करिना कपुरको हनुहार मात्र होइन, उनको कपालको सौन्दर्यले पनि धेरैलाई मोहित पा-यो । नपरोस् पनि किन, उनी आफ्नो कपालको विशेष ध्यान दिन्छिन् । कतिसम्म भने करिनाले छोटो कपाल बनाउनुपर्ने भूमिकालाई धेरैपटक अस्वीकार पनि
उत्तेजक भूमिकापछि किनारा लागेका नायिकाहरु
चार वर्षअगाडि दुलहीबाट सोझी युवतीको भूमिकामा फिल्मी यात्रा सुरु गरेकी हिरोइन हुन्, सुमिना घिमिरे। तर, यो फिल्मले उनलाई पर्याप्त चर्चा दिलाएन। रातारात हिट हुने लोभमा अंग प्रदर्शनको बाटो रोजिन्। स्टार, लभ फरेभर, नाइन ओ क्लक, अप्रिल फुल लगायत फिल्ममा छोटा लुगा लगाएर कामुक अवतारमा देखिने प्रयास गरिन्।
१८औं ईमेज अवार्ड सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको महाउत्सव १८औं ईमेज अवार्ड शनिबार राजधानीमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
होटल सोल्टीमा भएको महाउत्सवको पब्लिक च्वाइस अवार्ड चलचित्र ‘वडा नम्बर छ’ को ‘सुर्के थैली खै !’ गीतले जितेको छ । यो अवार्डमा एसएमएस भोटका आधारमा विजेता चयन गरिएको हो ।
भाग्यले बाँचेकाहरु हङकङमा
काठमाडौ । नेपालको विनाशकारी भूकम्पमा परी चमत्कारिक रुपमा नयाँ जीवन पाएका नेपालीको कथामा तयार पारिएको चर्चित डकुमेन्ट्री फिल्म ‘भाग्यले बाँचेकाहरु’ हङकङमा पनि प्रदर्शन हुने भएको छ । हङकङमा प्रदर्शन हुन लागेको यो पहिलोपटक हो ।
लमजुङ सेवा समिति हङकङको आयोजनामा आगामी अक्टोबर २ तारिख आइतबारका